Kusimudzira kwemadhorobha ekunwa mvura mitsara muCanada - Wuxi Lianyou Plastic Viwanda Co, Ltd.
Kuvandudzwa kwemigwagwa yemvura yekunwa mumaguta muCanada
Nekuwedzera kwekukwirisa kwemadhorobha, akasiyana mapaipi emapepanhau akawedzeredzwawo kubva kumberi kwepombi dzesimbi nemapombi esimbi, uye hunhu hwave huchienderera mberi huchivandudzwa. Inofananidzwa nemamwe marudzi emapombi, PE mapaipi ane yakaderera mainjiniya mutengo, anovimbika maficha, uye nekukurumidza kufambira mberi. Uye zvimwe zvakanakira, inokodzera kwazvo mapaipi network ekugadzirisa mapurojekiti.
Pe mvura yekupa pombi ine hutano hwakanaka, haina kubereka mabhakitiriya uye tsvina, zvinhu zvakasarudzika zvePe hazviburitse chepfu, uye haina zvinorema simbi zvinowedzera, izvo zvinodzivirira kusvibiswa kwechipiri kwemvura inopinzwa uye kunoenderana nemitemo yenyika. Chiyero chemvura; iro remadziro emukati rakapfava, uye coefficient yekukwesana iri pasi zvishoma;
Panguva imwecheteyo, iyo inochinja, kusagadzikana kwesimba, yakasimba kuvhunduka kusagadzikana uye kusagadzikana kuramba kwemapaipi ePE ane kukwikwidza kwakasimba. Nyore kuisa, inochinjika uye nyore kutakura, iri girini uye inovaka nharaunda zvekuvakisa zvinhu. Izvo zvakanakira zviri pamusoro zvinoita PE mvura yekupa pombi yakajairika yekuvakisa pombi dzemvura pombi muhupenyu hwezuva nezuva.
Panyaya yeinjiniya simba kufambisa, mapaipi ePE ari nyore kwazvo kutakura. Mapaipi ePE akareruka kupfuura mapaipi esimbi, kwakakurudzira mapaipi uye mapaipi ekongiri. Mapaipi ekupa mvura ePE ari nyore kuisa uye kutakura, ayo anogona kunyatso chengetedza zvido zveinjiniya. Manpower nemidziyo zvinoderedza mutengo wekumisikidza uye kurasikirwa kweprojekiti.
Parizvino tiri kupa hukuru hukuru hwemapaipi ePE kuCananda kuitira kuvandudzwa kwenzvimbo dzemvura yekunwa dzemumadhorobha